Ndị na-emepụta China Flange nut na ndị na-eweta ya | Jiuhe
A na-akpọkwa ụdị a Hexagon Flange Nut paịd nut, ifuru - nut tooth, flange nut na ndị ọzọ. A na-ejikarị ya maka njikọta ọkpọkọ ma ọ bụ maka iberibe ọrụ ndị dị mkpa iji bulie nri kọntaktị elu. Ejiri ezigbo ngwaahịa rụọ ya nke ọma. Ọ bụ ihe eji ejikọ ọnụ nwere eriri dị n'ime ma jiri ya mee ihe na njikọta, a nwekwara ike iji ya dị ka akụkụ nke arụ ọrụ nke ejiri ya mee ihe na ntanye iji nyefee ngagharị ma ọ bụ ike. Na mgbakwunye, Hexagon Flange Nut nwere uru pụtara ìhè nke ịdị elu, ndụ ọrụ dị ogologo, nkenke dị elu, na-eyi nguzogide, nguzogide corrosion, kọmpat, usoro dị mma, ụgwọ ọrụ dị ala yana arụ ọrụ dị elu. Ọ nwekwara ike ịhazi ya dịka ihe ndị ahịa dị iche iche siri chọọ. Ihe ọzọ bụ na ọ bụ otu nha na ya na eri dị ka hexagon nut niile, mana e jiri ya tụnyere nri hexagon nut, ọ bụ otu akpa na akụ, ma nwee usoro mgbochi mkpịsị ụkwụ dị n'okpuru, nke na-eme ka kọntaktị elu mpaghara ahụ dịkwuo elu. nke aku na mpempe ọrụ. Yabụ, esemokwu siri ike karịa njikọta nke nri na akụrụngwa nkịtị. Hexagon Flange Nut bu ezigbo ndi ahia anyi n’uwa n’iile.
Hexagon flange nut: Ihe omuma nke flange nut bu dika ndi a: flange nut nwere iron, nwekwara igwe anaghị agba.B.B iron bu nke a kariri. Ma dika ndi ahia ahia choro ibanye ya na agba. Usoro ọgwụgwọ electroplating nwere nchedo gburugburu ya na ndị na - abụghị gburugburu nchekwa.Electroplating nwere zinc agba gburugburu nchekwa, nickel na - echebe gburugburu, zinc nchedo gburugburu ebe obibi, zinc nchedo gburugburu na ihe ndị ọzọ, nwekwara electroplating nkịtị, zinc ọcha, zinc agba, zinc ojii, nickel ọcha na ihe ndị ọzọ.
Ntuziaka eriri (d) M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20
Olulu Anu kpuchie 0.8 1 1.25 1.5 1,75 2 2 2,5
Ezigbo eri1 / / 1 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5
Ezigbo eri2 / / / 1 1.25 / / /
c opekempe 1 1.1 1,2 1.5 1.8 2,1 2,4 3
dc kacha 11.8 14,2 17.9 21.8 26 29,9 34.5 42.8
e opekempe 8.79 11.05 14.38 16.64 20,03 23.36 26.75 32.95
k kacha 5 6 8 10 12 14 16 20
opekempe 4,7 5,7 7,6 9.6 11.6 13,3 15.3 18.9
s kacha 8 10 13 15 18 21 24 30
opekempe 7.78 9.78 12.73 14.73 17.73 20,67 23.67 29.67
Elu ala Zinc na-acha ọcha
Nha M4-M24 & Nabata Nhazi
1.OEM, onye na-azụ ihe, ndị na-azụ ihe eji enyere ndị ahịa aka.
2. Enwere ike idozi usoro pụrụ iche na nke pụrụ iche nye ndị ahịa anyị site n’aka ndị ọrụ injinia zụrụ nke ọma na ndị ọrụ.
3.We nwere ike inye nlele n'efu maka nlele gị.
hexagon serretated nri flange
Nke gara aga: Hex aku
Osote: Square nri